သိက္ခာရှိစွာနဲ့ပဲ လမ်းခွဲတတ်ကြပါစေ •
30/09/2019 Yan Naing Life Style 0
လောကကြီးထဲမှာ ယောက်ျားလေး ဖြစ်စေ မိန်းခလေး ဖြစ်ပါစေ … ကိုယ့်ချစ်သူက နောက်ကွယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေတာတွေ ၊ ခြေရှုပ်နေတာတွေကို သိရက်နဲ့ အကြိမ်ကြိမ်နားလည် ခွင့်လွှတ် ပေးပြီး အတင်း လိုက်တွယ်ကပ် နေတာတွေဟာ လောကကြီးထဲ ကိုယ်နဲ့ တူတန်တဲ့ ယောက်ျား ‘ မိန်းမ ရှား နေလို့ များထင်နေလား ။ ယောက်ျား ၊ မိန်းမ ဆိုတဲ့ လူသားတွေ ပေါပါတယ်
” သစ္စာတရား ” ဆိုတာ ရှားပါးလို့
” မေတ္တာတရား ပိုပေးမိလိုက်သူ ” ရှားလို့
” သံယောဇဉ်တွေ ” ဖြတ်ရခက်နေလို့
” အချစ် ” ဆိုတာကို တန်ဖိုးထားလို့
” ကိုယ့်သိက္ခာနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ” ကို စောင့်ထိန်း နေကြလို့
ကိုယ့်အပေါ် မျက်ရည် မျက်ခွက်နဲ့ အသနားခံပြီး လိုက်ဆွဲ နေတိုင်း ဒီယောက်ျား ၊ ဒီမိန်းမ ငါ့ကို မပြတ်နိုင်ပါဘူး ဆိုပြီး သိပ်အထင် ကြီးမနေကြနဲ့ ။ အချိန်တန်ရင် ကိုယ်နဲ့တန်ရာ ဘဝကို ရောက်သွားမှာပါပဲ
သစ္စာတရားကို တန်ဖိုးထားတတ် သူတွေဟာ သူတို့ ကိုယ်တိုင် အမှားကို မကျူလွန် မိအောင် စောင့်ထိန်းနိုင်သလို သစ္စာဖောက် ခံရရင်တောင် အကြိမ်ကြိမ် သဘောထားကြီးစွာ နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးတယ်
ဘာလို့လဲဆိုရင် ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိတဲ့ သစ္စာတရားကို အသက်မက တန်ဖိုးထား ခဲ့တော့ အလွယ်တကူ အပျက်စီးမခံနိုင်လို့ဘဲ ။ မေတ္တာကို လူတိုင်း အပေါ် ထားမိပေမဲ့ ပိုပေးမိတဲ့သူကို ပိုမြတ်နိုးတော့ အလွယ်တကူ အဆုံးရှုံး မခံနိုင်ကြတာလည်း ပါတယ် ။ အချစ် ဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို နှလုံးသားနဲ့ ရင်းပြီး ထိုက်ထိုက် တန်တန်ပေးခဲ့မိသူကို ကိုယ်ဘဲ ရယူ ပိုင်ဆိုင်ချင်တာက သဘာဝပါ ။
ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကို စောင့်ထိန်းသူတိုင်း ဒီတယောက်နဲ့ ပြတ်လိုက် ဟိုတယောက်နဲ့ တွဲလိုက် ဆိုတဲ့ စရိုက်မရှိသလို ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး ။ ဒီတယောက်သာ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ လက်ခံထားတတ်ကြပါတယ် ။
တချို့ ပြေတာကြားဖူးတယ် ” ငါ့လောက် မင့်အပေါ် ဘယ်သူမှ အနစ်နာမခံဘူး ” ဆိုတဲ့ စကားရယ် ” မင်းအပေါ် ငါ့လောက် ဘယ်သူမှ မချစ်နိုင်ဘူး ” ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ချည်နှောင် ချင်သေးတာ ။ အတော်လေး ရယ်စရာကောင်းလှပါတယ် ။
ကိုယ်တောင် သူ့ထက် သာတယ် ထင်တဲ့ သူနဲ့ ဖောက်ပြန် နေသေးတာပဲ သူ့မှာလည်း သူ့အိုးနဲ့ သူ့ဆန် တန်တဲ့သူ မရှိနိုင်ဘူးတဲ့လား တွေးကြည့်ပါ ။ ကိုယ်တောင် သူ့ထက် ပို ဂရုစိုက်တဲ့သူ အနား ချဉ်းကပ်နေ သေးတာဘဲ သူ့မှာလည်း ကိုယ့်ထက်သာတဲ့သူ မရှိနိုင် တော့ဘူးလား မေးလိုက်ချင်မိတယ် ။
ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာရှိရှိနဲ့ ချစ်တဲ့ ချစ်သူအပေါ် သစ္စာဖောက်သူတွေ အနေနဲ့ မိမိ မကောင်းတာတောင် ခခယယ တွဲကပ်နေတဲ့ ချစ်သူဟာ ဘဝ တလျှောက်လုံး လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ချစ်သူဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ် ။
သစ္စာမဲ့သူတွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်အပေါ် မေတ္တာကြီးမားစွာ ထားပေးတဲ့ တဖက်လူကို ပမာမခန့် မလုပ်ပါနဲ့ ။ အရမ်း ခံရခက်စေ ပါတယ် ။ သစ္စာကြီးသူတွေကို မဖြစ်နိုင်လို့ သစ္စာဖောက်ရင် ဖောက်သွားပါ ၊ ရိုးသားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဆက်လိမ်ညာ မနေပါနဲ့တော့ ။
တဖက်လူ အတွက် သိသိရက်ကြီး ဆက်ဆံရတာ သေမတတ် မွန်းကြပ်စေ ပါတယ် ။ ကိုယ့်ချစ်သူက အရှေ့မှာ ချစ်တယ် ပြောပြီး နောက်ကွယ်မှာ ဖောက်ပြန် တာသိရင် နှလုံးသားတွေ နာကျင်မှုမျိုး ဘာနဲ့ မတူအောင် အရမ်းနာကျင်ရပါတယ် ။
သစ္စာတရား ဆိုတာ တခါတလေ ငွေဆိုတဲ့ အရာနဲ့ ယှဉ်လာရင် ဒူးထောက်လိုက်ရတာတွေ ရှိပါသလို တခါတလေတော့လည်း သာယာ ရှာသူတွေ အတွက် လှည့်စားခံရတာတွေ ရှိပါတယ် ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သစ္စာဖောက်မိသွားပါစေ လှေနံ နှစ်ဖက် နင်းနေတဲ့ ခြေပိုင်ရှင် မဖြစ်မိပါစေနဲ့ ။
” ငါ့လောက် မင်းအပေါ် ဘယ်သူကောင်းလဲ ” ဆိုတဲ့ ပုံစံ ” နင့်နားမှာ ငါ မရှိလို့ မဖြစ်ပါဘူး ” ဆိုတဲ့ အချိုးမျိုးတော့ သွားမလုပ်မိ စေနဲ့ ။ သင်မရှိလည်း နှာခေါင်းပေါက်က အသက်ရှုနိုင် သေးတယ် … သေမသွားဘူး ။ လောကကြီးထဲ မဖြစ်နိုင်လို့ လမ်းခွဲသွားကြတဲ့ သူတွေ အများအပြား အခုချိန်ထိ အသက်ဆက်ရှင်နေကြဆဲပါပဲ ။
လူတယောက်ကို မချစ်နိုင်တော့လို့ ရှေ့ဆက် လက်တွဲဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့လို့ လမ်းခွဲမယ် ဆိုရင်တောင် သိက္ခာမဲ့စွာ သစ္စာဖောက်ပြီးမှ လမ်းခွဲခြင်းဟာ အယုတ်ညံ့ဆုံးပင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် … လူ့တန်ဖိုးကို နာလည်စွာ လမ်းခွဲခြင်းမျိုး ရွေးချယ်တတ်ကြပါစေနော်…….
လောကကွီးထဲမှာ ယောကျြားလေး ဖွဈစေ မိနျးခလေး ဖွဈပါစေ … ကိုယျ့ခဈြသူက နောကျကှယျမှာ ဖောကျပွနျနတောတှေ ၊ ခွရှေုပျနတောတှကေို သိရကျနဲ့ အကွိမျကွိမျနားလညျ ခှငျ့လှတျ ပေးပွီး အတငျး လိုကျတှယျကပျ နတောတှဟော လောကကွီးထဲ ကိုယျနဲ့ တူတနျတဲ့ ယောကျြား ‘ မိနျးမ ရှား နလေို့ မြားထငျနလေား ။ ယောကျြား ၊ မိနျးမ ဆိုတဲ့ လူသားတှေ ပေါပါတယျ
” သစ်စာတရား ” ဆိုတာ ရှားပါးလို့
” မတ်ေတာတရား ပိုပေးမိလိုကျသူ ” ရှားလို့
” သံယောဇဉျတှေ ” ဖွတျရခကျနလေို့
” အခဈြ ” ဆိုတာကို တနျဖိုးထားလို့
” ကိုယျ့သိက်ခာနဲ့ ကိုယျကငျြ့တရားတှေ ” ကို စောငျ့ထိနျး နကွေလို့
ကိုယျ့အပျေါ မကျြရညျ မကျြခှကျနဲ့ အသနားခံပွီး လိုကျဆှဲ နတေိုငျး ဒီယောကျြား ၊ ဒီမိနျးမ ငါ့ကို မပွတျနိုငျပါဘူး ဆိုပွီး သိပျအထငျ ကွီးမနကွေနဲ့ ။ အခြိနျတနျရငျ ကိုယျနဲ့တနျရာ ဘဝကို ရောကျသှားမှာပါပဲ
သစ်စာတရားကို တနျဖိုးထားတတျ သူတှဟော သူတို့ ကိုယျတိုငျ အမှားကို မကြူလှနျ မိအောငျ စောငျ့ထိနျးနိုငျသလို သစ်စာဖောကျ ခံရရငျတောငျ အကွိမျကွိမျ သဘောထားကွီးစှာ နားလညျ ခှငျ့လှတျပေးတယျ
ဘာလို့လဲဆိုရငျ ကိုယျ့ဆီမှာ ရှိတဲ့ သစ်စာတရားကို အသကျမက တနျဖိုးထား ခဲ့တော့ အလှယျတကူ အပကျြစီးမခံနိုငျလို့ဘဲ ။ မတ်ေတာကို လူတိုငျး အပျေါ ထားမိပမေဲ့ ပိုပေးမိတဲ့သူကို ပိုမွတျနိုးတော့ အလှယျတကူ အဆုံးရှုံး မခံနိုငျကွတာလညျး ပါတယျ ။ အခဈြ ဆိုတဲ့ စိတျခံစားမှုကို နှလုံးသားနဲ့ ရငျးပွီး ထိုကျထိုကျ တနျတနျပေးခဲ့မိသူကို ကိုယျဘဲ ရယူ ပိုငျဆိုငျခငျြတာက သဘာဝပါ ။
ကိုယျကငျြ့သိက်ခာကို စောငျ့ထိနျးသူတိုငျး ဒီတယောကျနဲ့ ပွတျလိုကျ ဟိုတယောကျနဲ့ တှဲလိုကျ ဆိုတဲ့ စရိုကျမရှိသလို ဘယျတော့မှ မလုပျဘူး ။ ဒီတယောကျသာ ကောငျးသညျဖွဈစေ ဆိုးသညျဖွဈစေ လကျခံထားတတျကွပါတယျ ။
တခြို့ ပွတောကွားဖူးတယျ ” ငါ့လောကျ မငျ့အပျေါ ဘယျသူမှ အနဈနာမခံဘူး ” ဆိုတဲ့ စကားရယျ ” မငျးအပျေါ ငါ့လောကျ ဘယျသူမှ မခဈြနိုငျဘူး ” ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ခညျြနှောငျ ခငျြသေးတာ ။ အတျောလေး ရယျစရာကောငျးလှပါတယျ ။
ကိုယျတောငျ သူ့ထကျ သာတယျ ထငျတဲ့ သူနဲ့ ဖောကျပွနျ နသေေးတာပဲ သူ့မှာလညျး သူ့အိုးနဲ့ သူ့ဆနျ တနျတဲ့သူ မရှိနိုငျဘူးတဲ့လား တှေးကွညျ့ပါ ။ ကိုယျတောငျ သူ့ထကျ ပို ဂရုစိုကျတဲ့သူ အနား ခဉျြးကပျနေ သေးတာဘဲ သူ့မှာလညျး ကိုယျ့ထကျသာတဲ့သူ မရှိနိုငျ တော့ဘူးလား မေးလိုကျခငျြမိတယျ ။
ကိုယျ့အပျေါ သစ်စာရှိရှိနဲ့ ခဈြတဲ့ ခဈြသူအပျေါ သစ်စာဖောကျသူတှေ အနနေဲ့ မိမိ မကောငျးတာတောငျ ခခယယ တှဲကပျနတေဲ့ ခဈြသူဟာ ဘဝ တလြှောကျလုံး လကျမလှတျသငျ့တဲ့ ခဈြသူဆိုတာ သိစခေငျြပါတယျ ။
သစ်စာမဲ့သူတှေ အနနေဲ့ ကိုယျ့အပျေါ မတ်ေတာကွီးမားစှာ ထားပေးတဲ့ တဖကျလူကို ပမာမခနျ့ မလုပျပါနဲ့ ။ အရမျး ခံရခကျစေ ပါတယျ ။ သစ်စာကွီးသူတှကေို မဖွဈနိုငျလို့ သစ်စာဖောကျရငျ ဖောကျသှားပါ ၊ ရိုးသားခငျြယောငျဆောငျပွီး ဆကျလိမျညာ မနပေါနဲ့တော့ ။
တဖကျလူ အတှကျ သိသိရကျကွီး ဆကျဆံရတာ သမေတတျ မှနျးကွပျစေ ပါတယျ ။ ကိုယျ့ခဈြသူက အရှမှေ့ာ ခဈြတယျ ပွောပွီး နောကျကှယျမှာ ဖောကျပွနျ တာသိရငျ နှလုံးသားတှေ နာကငျြမှုမြိုး ဘာနဲ့ မတူအောငျ အရမျးနာကငျြရပါတယျ ။
သစ်စာတရား ဆိုတာ တခါတလေ ငှဆေိုတဲ့ အရာနဲ့ ယှဉျလာရငျ ဒူးထောကျလိုကျရတာတှေ ရှိပါသလို တခါတလတေော့လညျး သာယာ ရှာသူတှေ အတှကျ လှညျ့စားခံရတာတှေ ရှိပါတယျ ။ ဘယျလိုနညျးနဲ့ သစ်စာဖောကျမိသှားပါစေ လှနေံ နှဈဖကျ နငျးနတေဲ့ ခွပေိုငျရှငျ မဖွဈမိပါစနေဲ့ ။
” ငါ့လောကျ မငျးအပျေါ ဘယျသူကောငျးလဲ ” ဆိုတဲ့ ပုံစံ ” နငျ့နားမှာ ငါ မရှိလို့ မဖွဈပါဘူး ” ဆိုတဲ့ အခြိုးမြိုးတော့ သှားမလုပျမိ စနေဲ့ ။ သငျမရှိလညျး နှာခေါငျးပေါကျက အသကျရှုနိုငျ သေးတယျ … သမေသှားဘူး ။ လောကကွီးထဲ မဖွဈနိုငျလို့ လမျးခှဲသှားကွတဲ့ သူတှေ အမြားအပွား အခုခြိနျထိ အသကျဆကျရှငျနကွေဆဲပါပဲ ။
လူတယောကျကို မခဈြနိုငျတော့လို့ ရှဆေ့ကျ လကျတှဲဖို့ မဖွဈနိုငျတော့လို့ လမျးခှဲမယျ ဆိုရငျတောငျ သိက်ခာမဲ့စှာ သစ်စာဖောကျပွီးမှ လမျးခှဲခွငျးဟာ အယုတျညံ့ဆုံးပငျ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ … လူ့တနျဖိုးကို နာလညျစှာ လမျးခှဲခွငျးမြိုး ရှေးခယျြတတျကွပါစနေျော…….
ဉာဏ်ရည်မမီတဲ့ ယောက်ျားတွေက ပိုမိုဖောက်ပြန်တတ်လေ့ရှိကြောင်း သုတေသီများထုတ်ပြန်